यो अनौठो रोग उल्टो सारा परिवारको जीवन गर्दछ। असंबादी - थाहा थिएन जो र आमाबाबुले बच्चा, मनोवैज्ञानिक र psychiatrists कि आफ्नो बच्चा को निष्कर्षमा सुन्न भन्ने महसुस गरेनन्। यो छ जो, कसरी यो बुझ्न रोग र कसरी यो संग बाँच्न सिक्न? पहिले, जब व्यक्ति यी विकार मानसिक असामान्य को एक stigma राख्छ। अब, थप र जागरूकता उठाउनु र सारा परिवार र बच्चा प्रशिक्षण मा सहयोग गर्न गरेको छ।
धेरै मानिसहरू यो रोगले मात्र छोराछोरीलाई असर गर्छ भन्ने सोच्छन्। तथापि, सानो मानिसहरूलाई बढ्न, वयस्क हुन्छन्। र वयस्क जीवनको मा यस्तो व्यक्ति समस्या र अवरोधहरू धेरै सामना छ। यसरी, असंबादी ... जो यो छ? Weirdo? एक मानिस एक कठिन वर्ण? मानसिक बिरामी? यो विकार बाहिर संसारबाट आउने, को धारणा र stimuli (प्रोत्साहन) को स्कोप को समझ असर गर्छ। मानिस शब्द र भावना प्रियजनहरूलाई प्रतिक्रिया छैन, अक्सर भन्छन्, पर्याप्त संवाद गर्न असमर्थ छ। तथापि, तिनीहरूले अक्सर यस्तो प्रकाश, गन्ध वा हल्ला रूपमा विभिन्न बाह्य कारक वृद्धि संवेदनशीलता अवलोकन छन्। सधैं तथापि, जसलाई गाह्रो वा असम्भव कुराकानी गर्न छ संग व्यक्ति, हामी त्यो असंबादी छ भनेर भन्न सकिन्छ। यसलाई साथीहरू र साथीहरूले लागि कसले हो? यो भावना व्यक्त र अन्य व्यक्तिसँग सम्बन्ध निर्माण गर्न गाह्रो छ। यो Autism भोगिरहेका वयस्क, अक्सर कुनै परिवार छ कि यस कारण लागि हो। त्यस्ता मानिसहरूलाई व्यक्ति संग आँखा सम्पर्क कायम गर्न सक्दैन। फलस्वरूप, तिनीहरूले गल्ती अशिक्षित र असंवेदनशील रूपमा कथित। सामान्यतया, यो पक्ष प्रतिक्रिया बेवास्ता वा लागि खुला अवहेलना को कमी छलफल र तिनीहरूले असंबादी तिनीहरूको अगाडि कि आपत्ति छैन आउँछन्। जो खडा गर्न सक्षम छ? कसरी त्यस्तो मान्छे पूर्ण जीवन नेतृत्व गर्न अनुमति समाज को शिक्षा र परिवार, कसरी सुधार गर्ने?
अर्को समस्या भाषण विकार को विविधता छ। र यो केवल तथ्यलाई छ मान्छे भनेर कठिनाइ छ ध्वनि को articulation, उच्चारण वा नामकरण वस्तुहरु।
Autism मानिसहरूलाई अरूसित संवाद मा संलग्न गर्न सक्दैन। कुराकानीमा मुख्यतः बिरामीको स्वगत आधारित छ, जो पढ्न सक्दैन
गैर-मौखिक संकेत, विडंबना, मजाक र गिल्ला।
मात्र आफ्नो व्यवहार र संचार कौशल को पुनर्वास मा Autism लागि कार्यक्रम उद्देश्य छ, तर पनि परिवारको साथ काम गर्न। दुर्भाग्यवश, जस्तै रूस र विशेषज्ञ मद्दत प्रदान गर्न, लामो पर्याप्त रूपमा गर्न सक्ने संस्थाहरू अन्य देशहरूमा। यो असंबादी छोराछोरीलाई अध्ययन उपलब्ध आफ्नो परिवारको हरेक आवश्यकता हो भन्ने हो। त्यसैले, मुख्य बोझ आमाबाबुले पूरा गर्न आवश्यक छ। यो रोगले संग वयस्क पहिले पत्ता कि गरिएका र निदान, "वनस्पति विज्ञान" को रूपमा सार्वजनिक द्वारा कथित छ, eccentrics, cranks। धेरै देशहरूमा, परिवार जागरूकता हुर्काउन उद्देश्य विशेष घटनाहरू संगठित जो Autism को समस्या, संग संगतले छन्। तर अझै पनि व्यावसायिक मनोवैज्ञानिक र अभाव सामाजिक कार्यकर्ता, विशेषज्ञ सहयोग उपलब्ध सक्ने। व्यवहार चिकित्सा असंबादी बच्चाको लागि, निस्सन्देह, क्षणमा सबैभन्दा प्रभावकारी विधि हो, तर धेरै आमाबाबुले यस्तो संभावना को कहिल्यै सुनेका छन्। विद्यालय शिक्षक, र शिक्षकहरूलाई पनि बच्चाहरु सामना कठिनाइको सामना। यसलाई त्यसैले उपयुक्त प्रशिक्षण र शिक्षकहरूको व्यावसायिक विकास रूपमा आवश्यक छ। कुनै पनि उपाय पनि Autism सामाजिक बहिष्करण रोक्न क्रममा, उद्देश्य हुनुपर्छ।
यो के हो - अन्धकारमा बस्न?
यो मानिस एक वर्ष लागि एक हृदय बिना बस्ने!
विद्यार्थी जो त्यो सिढी overcomes एक बिजुली व्हीलचेयर, विकास
गिजा आक्रान्त द्वारा प्रमाणित?
कसरी गर्भवती छोटो समयमा जोडाहरू संग प्राप्त गर्न
आफ्नै हातले पेंसिल: तीनवटा रोचक तरिका
त्रुटिहरू लागि डिस्क जाँच: को हार्ड ड्राइभ र रोकथाम पुनस्थापित
"ब्रेमेन टाउन संगीतकार" यो कथा लेखे कसले?
संस्कृति र वास्तुकला यसको स्मारक दावा गर्ने अद्भुत शहर, - शहर सिंहले
भान्सा मा तल्ला देखि मानक उचाइ काउन्टरटप
यस ग्रह को उपग्रहहरु। त्यहाँ जीवन टाइटन मा छ?
फिल्म "को दार्शनिकहरू: अस्तित्व को पाठ": अभिनेता र भूमिकाको, निर्देशक